သံသရာလမ်းမအလယ်… မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးစီးလို့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သံသရာလမ်းမအလယ်… မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးစီးလို့…
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Feb 18, 2013 in Creative Writing, Education, Environment, My Dear Diary | 24 comments
ခရီးသည်ရလို့… တောင်ဒဂုံဘက်ကို လိုက်ပို့မယ်ဆိုအသွား… ညနေ (၆)နာရီကျော်ကျော် (၇)နာရီနီးနီး…
သံသုမာလမ်းပေါ်မှာ ကားတွေပိတ်လို့… သင်္ဃန်းကျွန်းဘက်ကို ပြန်ထွက်ရတယ်… ပြီးတော့မှစံပြဈေးဘက်ကနေ တောင်ဒဂုံဘက်ကို ပြန်ဆင်းရတယ်…
ကျောက်မြောင်းကိုဖြတ်တော့လဲ… သဌိပဌာန်လမ်းကို ကားတွေသွားမရလို့…
လမ်းကကျဉ်းကျဉ်း… ကားကများများနဲ့ လမ်းကြိုလမ်းကြားထဲက ဖြတ်မောင်းခဲ့ရသေးတယ်…
ရန်ကုန်မှာ ကားတွေများလာလို့ ကားတွေကြပ်လာတာ ယာဉ်ကျောပိတ်ဆို့တာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်ပေမယ့်…
မနေ့က တွေ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဖြင့် မပြောချင်ပေမယ့် ပြောရမလိုပါ့…
သံသရာရေအလျဉ်ကြောက ရုန်းထွက်ဖို့ မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးတွေဖွဲ့ကြပါတယ်…
တနည်းပြောရရင်… အများပြည်သူသွားလာမယ့်လမ်းတွေကို ပိတ်ပြီးတော့ တရားပွဲတွေကျင်းပကြပါတယ်…
ကျောက်မြောင်းထဲမှာ လူနေထူထပ်ပေမယ့် တရားပွဲလုပ်နိုင်လောက်အောင်ကျယ်တဲ့ မြေကွက်လပ်တချို့ရှိပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှအရေးတယူရှင်းလင်းပြီး လူအများအသုံးပြုဖို့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထမဖန်တီးကြသလို…
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်ကလဲ… အခုမှ လမ်းပြင်၊ လမ်းခင်း၊ ပလက်ဖောင်းပြင်နဲ့ အသဲအသန်လုပ်နေကြတော့
ရပ်ကွက်ထဲကမြေကွက်လပ်ကို Public Area တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးဖို့စိတ်မ၀င်စား…
ရပ်ကွက်နေလူထုကလဲ ဂေါ်ပြား… ပေါက်တူးလေးဆွဲပြီး ဒီမြေကွက်လပ်ကိုရှင်းလင်ဖို့ ငွေအား၊ လူအား မပံ့ပိုးနိုင်….
သံသုမာလမ်းဘက်မှာလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်း… မြေလွတ်တွေရှိပါရဲ့…
အလွယ်လမ်းကိုလိုက်… လမ်းမပေါ်တက်… လူအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လမ်းမှာ… အလှူတွေခံ… အသံချဲ့စက်တွေဖွင့်… တရားတွေဟော…
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တာ လွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုပြီး… လမ်းမပေါ်တက်ဆေးရိုးလှမ်းတယ်ဆိုတာထက်… အခု လမ်းမပေါ်တက်ပြီး ဘာသာရေးတရားပါဟောနေပါပြီ…
တရားပွဲစီစဉ်သူတွေက စီစဉ်ရင်တောင် တရားဟောမယ့်ဆရာတော်ဘုရားများက သင့်၏… မသင့်၏ မစဉ်းစားသင့်ဘူးလား…
ဒါမှမဟုတ်… ငါကကောင်းရာကောင်းကြောင်းတရားဟောတာဆိုပြီး လမ်းပိတ်တာဟာ Power Abuse လုပ်တာပါပဲ…
ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာကို ဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီး လူအများကိုနှောက်ယှက်တာပါပဲ…
တရားပွဲကနေ မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးကို လမ်းလည်ခေါင်တည့်တည့်ပိတ်ဖွဲ့နေလို့… အများပြည်သူတွေ ခရီးလမ်းမဖြောင့်ဖြူးဖြစ်ရတာ…
အဲဒီလို လမ်းပိတ်ထားတဲ့တရားပွဲတွေကို မြင်သွားတဲ့နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ယောက်ကရော ဘယ်လိုများမှတ်ချက်ချကြမှာလဲ…
အဲဒီလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင်ကြသောအခြားသော ဘာသာဝင်များကရော… ဘယ်လိုတွေများတွေးကြပါလိမ့်မလဲ…
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များစည်းမရှိကမ်းမရှိ လမ်းမပေါ်တက်ထင်တိုင်းကျဲလို့ရတယ်ဆိုရင်…
ဘယ်တော့မှ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ… စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်မလာတော့ပါဘူး…
ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ အများပြည်သူကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ…
တရားဟောကြမယ့် ဓမ္မစရိယများ… တရားပွဲကို စတိတ်ရှိုးပွဲလိုတင်သွင်းကြမယ့် တရားပွဲစီစဉ်ကြသူများခင်ဗျား…
ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါရစေ… ဒီမိုကရေစီဆန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကို… အာဏာရှင်ဆန်သော… အခွင့်အရေးတစ်ဆုံးယူတတ်သော
သံသရာရေလည်ကျောမှာ မြောနေတဲ့တဲ့သူတွေကယ်တယ်ဖို့ မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးကို လူသွားလမ်းမအလယ်မှာမတည်ဘဲ…
အဘက်ဘက်အကျိုးကို ရှေ့ရှုပြီး နေရာပြောင်းဆောင်ရွက်စေလိုပါကြောင်း….
shwe tallatr says:
အနော်တို့ဆီမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ငွေလာလှူတာရိုက်လွတ်တယ်
ခင်ည စက်ဘီးစီးဝင်လို့ဆိုပဲ အများသူငါလည်းအဲဒီကျောင်းထဲကား
ဒကာကြီး ဒီပို.စ်ကိုတင်တာ ဒကာသွားမယ်လမ်းမှာပိတ်နေလို. စိတ်ထဲ ဒေါသမောဟတွေနဲ. တင်တယ်ထင်ပ..
အဲဒါ ဘုန်းကြီးတွေ ဟောချင်လို.ဟုတ်ဘူးကွဲ. ဒါတွေအားလုံး ဒကာ၊ဒကာမတွေ လုပ်တာ.. သူတို.ပင့်တဲ့အချိန် ကြွရတဲ့ ဘုန်းကြီးကို ဘယ်နှယ့် အပြစ်မြင်နေပါလိမ့်..
အင်း သံသရာဝတ်ဆင်းရဲမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေ……………
ဒါတွေပြောရရင် ငရဲက တက်ရဖွယ်မမြင်တော့ပါဘူး ၀တုတ်ရယ်…
သူတည်းတယောက်ကောင်းဖို့ရောက်မူ ဆိုသလို… တရားပွဲစီစဉ်သူများ အတ္တတွေ လျော့ပြီး လူအများအဆင်အောင် ဥာဏ်နဲနဲသုံးပြီး လုပ်စေချင်တာပါ…
ကိုယ်တော့ ကုသိုလ်ရ သူများတော့ စီးပွားပျက်၊ ကျမ်းမာရေးထိခိုက်ဆို .. ကိုယ့် အလှုကကော ဖြူစင်နိုင်ပါဦးမလား….
အသံချဲ့စက်တွေကတော့ ဒီညကတင် လတ်တလော ခံဇားထားရတာမို့ မပြောတော့ပါဝူးးးးးး
တော်ဘီကွယ်.. နိုင်ငံရေးသိပ်မပြောချင်ဝူး.. အသီးကွဲတာတောင် အေးဆေးမကွဲရ၀ူး…
အူးလေးရေ … ရော့စ် .. သံခမောက်နဲ့ သံချပ်ကာအင်္ကျီ
ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာတွေ သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေဗျာ…
ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ် တာဝန်ရှိသူတွေကနေ နားလည်အောင် ပြောပြပြီး အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးရင် အဆင်ပြေမယ့်ကိစ္စလို့ မြင်ပါတယ်ဗျာ
မြန်မာတွေ အကျင့်ကို သိနေတော့လဲ မပြောတော့ပါဘူး
အန်တီ ပဒုမ္မာ ပြောခဲ့ ဖူးတာလား အရီးခင်လတ် ပြောခဲ့ ဖူးတာလား ပဲ . . (နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက် ကတော့ သေချာတယ်) . . . . . . . နေရာ တစ်ခုမှာ မတ်တပ် ရပ်ဖူး မှ အဲ့ဒီ့ နေရာ ရဲ့ ခံစားမှု ကို သိနိုင်မယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပါ . . . .။
ကိုရင် မာဃ . . နင် က မြန်မာတွေ အကျင့် သိတယ် ပြောရအောင် မြန်မာ ဘယ်နှစ်ယောက် ကိုများ စစ်တမ်း လိုက်ကောက်ပြီး လို့ . . အဲ့လိုမျိုး ၀ါးလုံးရှည် နဲ့ သိမ်းကြုံး ရမ်း ရသလဲကွ . . ခွီးးးးးးးးးးး
:chee: . . . :saut:
လမ်းပေါ်မှာ တရားပွဲကျင်းပတာနဲ့ပတ်သတ်လို့ ကျုပ်ကတော့ လွှတ်သဘောကျသဗျ….
ဘာလို့ဆိုဒေါ့ဂါ လမ်းသွားရင်းလာရင်း လမ်းကြုံတရားနာလို့ရတဲ့ မဟာအခွင့်အရေးကိုဗျ….
၁။ သာသနာကို ကြိုက်သော်လည်း သာသနာနှင့် မကြုံကြိုက်ရသော လူ
၂။ သာသနာနှင့် ကြုံသော်လည်း သာသနာကို မကြိုက်သော လူ
၃။ သာသနာနှင့် လည်းမကြုံ သာသနာကိုလည်း မကြိုက်သော လူ
၄။ သာသနာနှင့် လည်းကြုံ၏ သာသနာကိုလည်း ကြိုတ်၏…………..
ဆရာတော်တွေမှာတော့ ပင့်ရာကို လမ်းမပေါ်ဖြစ်လို့ မလိုက်လိုဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။
ညတရားပွဲကျင်းပဖို့ တနေကုန် လမ်းပိတ် စင်ထိုးထားတာကလည်း ပိုဆိုးပါသေးတယ်။
ဒီကိစ္စဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အန်တီ လမ်း၌ယဉ်ကျေးမှူ(၂) ပို့စ်ထဲမှာ ဆွေးနွေးထားသေးတယ်။
ဖက်ဖက်ကက်ရဲ့ ဒီစာလေးကို ပရင့်ထုတ်ပြီး တရားပွဲ မကျင်းပမီ သွားဝေလိုက်ရင် ဘယ့်နှယ်နေမလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံက.. ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဘယ်တုံးက ဖြစ်လိုက်တာလည်းဟင်င်င်..
ဖက်ဖက်ကက် ရေးထားတာကို ထောက်ခံပါတယ် ။
” မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်လို့ ”
” မြန်မာနိုင်ငံက.. ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဘယ်တုံးက ဖြစ်လိုက်တာလည်းဟင်င်င် ”
” မသိလိုက်လို့ ”
သူကြီး ရဲ့ ထောက်ကွက်ကြောင့် ပြုံးမိပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်အဖြစ် ပြဌာန်းခဲ့တယ်…
အဲဒီလိုပဲ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က အခြေခံဥပဒေမှာလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်အဖြစ်ပြဌာန်းခဲ့တယ်လို့လဲ
တချို့အချို့သော အရာတွေမှာ ရူးလ်အော့ပေါ်လစီတွေ ..ဘာတွေ ညာတွေ ပေတံတွေနဲ့ တိုင်းမရတာရှိသဗျ ..
ပထမအချက်အနေနဲ့ ပုထုဇဉ်မို့ အတ္တရှေ့ထားပီး ပြောရရင် အစ်နေ့အတွက် စီမံပေးထားသလို တရားကွင်းဆိုတာ မျိုးတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး ကျုပ်သမ္မတဖြစ်ရင်တောင် မလုပ်ပေးဘူး ….
ဒုတိယ အချက်ကတော့ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဇကားငှားသုံးရရင် အဘတ်ဗ်သည်ဂေါ့ထ်ပေါ့ ဘုရားအထက် ဘယ်သူရှိလဲမေးရင် ဂေါပကတွေ၊ ဒကာ၊ဒကာမတွေ အဆတ်ထ်ထရာပေါ့ …..
တတိယအချက်ကတော့ ခင်ညားရီးကိုယ်တိုင်(တော်တော်များများ) ဒစ်မွန်ကရေဇီသာ ပြောနေတာ .. ယာဉ်ထရရ်ဖစ်ထ် ဖြစ်ရင် အဲ့လို လမ်းဂျိုလမ်းဂျား ရပ်ကွက်ဂျို ရပ်ကွက်ဂျားက သွားရတယ်လို့ ဘယ်ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတက်သော ဒစ်မွန်ကရေဇီနိူင်ငံတွေမှာ ကျင့်သုံးဂျသတုန်း …. သွပ်.သွပ်
လမ်းဘယ်လောက် ကျပ်ကျပ် အဲ့သတ်မှတ်ပေးတဲ့ လမ်းပေါ်ကလွဲလို့ ဟိုကျော်..ဒီခွ လုပ်ရတယ်လို့ ကျုပ်ကြားဖူးဘူး .. ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့တွေ အလွယ်လိုက်ပီး လမ်းနီးချင်လို့ မရဘူးဗျ :harr:
အိန်ဒိယမှာ မိန်းရုတ်ဒ်ကို ၄လမ်းပေးထားတယ် ၃လမ်းဘဲ မောင်းခွင့်ရှိပီး ကျန်တလမ်းက အန်မာဂျန်ဆီဝေးဗျ….. အားလုံး တရွေ့ရွေ့နဲ့ သွားရတယ်။ တခြားနိူင်ငံတွေတော့ မရောက်ဘူးလို့ မသိဘူး ကျုပ်လည်း အိန်ဒိယသာပြောတာ တမူး-အင်ဖာနယ်စပ်လောက် ရောက်ဖူးတာ။
ဆိုတော့ဗျာ ကျုပ်တို့ နိူင်ငံတိုးတက်လာရင် လမ်းတွေလဲ ကျပ်လာလိမ့်မယ် အဲ့လာကို လမ်းနီးချင်လို့ အတိုဆွဲရင် ဟိုကပိတ် ဒီကပိတ်နဲ့ လမ်းမနီးဘဲ ….. အဲ့ဒါ..အဲ့ဒါ
ဒီမိုကရေစီနဲ့ လမ်းနီးချင်တာ ဘာဘာ..ဘာမှမဆိုင်
ဦးနု အဲဒီလိုလုပ်မယ်ကြေငြာပြီးမဲဆွယ်ခဲ့တာပါ..။ ဥပဒေအဖြစ်သက်ရောက်အောင်မြင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ..။
အဲဒါကြောင့်.. ပြည်တွင်းစစ်နဲ့တိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး.. ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းအာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတာပါပဲ..။ တိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်(အင်မတန်) အန္တရာယ်များပါတယ်..။
သမိုင်းကို လူတွေသိအောင် အထပ်ထပ်ရေးကြပြောကြစေလိုပါတယ်..။
ဦးနုမတိုင်ခင်က အခြေခံဥပဒေဆွဲတုံးကလည်း.. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် လုံးဝပယ်ချခဲ့တဲ့ အဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ်..။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမှာလည်း.. နိုင်ငံတော်ဘာသာ(State Religion)အဖြစ်ပြဌာန်းလိုက်တယ်လို့.. ဘယ်တုံးကမှမဖတ်ဖူးခဲ့ပါ..
အမှတ်မမှားရင်.. အခုတလောမှ.. လွှတ်တော်ထဲတယောက်ယောက်က မေးလိုက်တာတော့ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ..
၁၉၆၂ မှာ ကျွန်မတို့ ကချင်တွေ သူပုန်ထလာတာဖြစ်တယ်၊ ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတော်ဘာသာ ဆိုတာကို ဘယ်သူ့ကိုမှ တိုင်ပင်တာမရှိပဲ ဦးနု သူ့ဟာသူ စီစဉ်လုပ်ခဲ့တယ် နိုင်ငံတော်ဘာသာမှာ ဆိုရင် (တစ်နိုင်ငံလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့သွားရမယ်) ကျန်တဲ့ ခရစ်ယာန် ၊နတ်စား ၊ စတဲ့ ဘာသာတွေကို နှိမ်သလိုဖြစ်လာပြီး ဒါကြောင့် KIO တော်လှန်ရေးစလာတာပါ၊ ကချင်တော်လှန်ရေးကိုစခဲ့တာ နော်ဆိုင်းဟုတ်ပါတယ် နော်ဆိုင်းက ရှမ်းပြည်ကနေ ကချင်ဖက်ကိုတက်လာတော့ သူ့ကို ဘယ်သူမှ ကြိုဆိုထောက်ခံမဲ့သူ မရှိလို့ နော်ဆိုင်းက တရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေနဲ့ ပေါင်းသွားတာဖြစ်တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဒေါ်အင်ဖန်ဂျာရာ ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ – မြစ်ကြီးနား၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၂ (YPI) (ဆိုင်းဆွတ်)
၀ိုင်းတိုက်လိုက်ကြတာ.. ကြံရည် ၆ခွက်တောင်..
သူကြီး တင်ပေးတာ လုံးဝထောက်ခံပါတယ်။ စိတ်ကုန်တယ် ဦးနုကို။
ကြည့်ရတာ.. လမ်းပိတ်ပြီး တရားပွဲကျင်းပနေလို့.. လူနာဆေး၇ုံအချိန်မှီမရောက်လိုက်ဖြစ်ပြီး.. သေသွားတဲ့… လူနာရှင်က.. အဲဒီပွဲမျိုးဦးစီးကျင်းပတဲ့ သူတွေကို.. လူသေစေမှုနဲ့ တရားစွဲတာတွေလုပ်မှ..မှတ်သွားကြမယ်ထင်တယ်..
တရားနာပြီး.. တရားမရှိသူများရဲ့.. လမ်းပိတ်မတရားပွဲများလို့.. အမည်ပေးရကောင်းမယ်ထင်ကြောင်း…။ :buu:
အရင်ကာလက ဘာသာခြားမင်းတစ်ပါးရဲ့ နှိပ်စက်မှုကြောင့် ထွက်ပြေးရတဲ့
ရဟန်းများဟာ သာသနာတည်တံ့စေရေးအတွက် အစာရေစာပြတ်လတ်တဲ့
အချိန်မှာ ရင်ဘတ်ပေါ်သဲထုပ်ဖိပြိး ပရိရတ်တိစာပေမပျောက်ကွယ်စေဘို့
ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်၊ဒိရဟန်းများသာ ကိုဖက်တင်ထားသော ပို့စ် ကို
ခရစ်ယာန် အယူဝါဒထွန်းကားသော တိုင်းပြည်များမှာ သင်းအုပ်ဆရာတော်
များ မျက်နှာရကြပါတယ်၊မူဆလင် အယူဝါဒထွန်းကားသော တိုင်းပြည်များ
တွင် ပလိဆရာများ မျက်နှာရကြပါတယ်၊မြန်မာပြည်သည် ဗုဒ္ဗဘာသာ ထွန်း
ကားသောတိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒိမိုကရေစိ တိုင်းပြည်တိုင်းမှာလည်း အဖြူ
အမည်း မခွဲခြားပဲ တန်းတူညိတူဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးမရကြပါဘူး၊အမေရိကန်
လိုနိုင်ငံမျိူးမှာတောင် အိုဘားမားသမ္မတဖြစ်လာပေမဲ့ ယခုထိ ခွဲခြားမှူတွေရှိ
” သင်းအုပ်ဆရာတော်များ မျက်နှာရကြပါတယ်၊
ပလိဆရာများ မျက်နှာရကြပါတယ် ”
အဘတို့ ဘုန်းကြီးတွေက ပိုရတာပေါ့ကွယ် ။
ဒူးပါထောက်ပြီး ကန်တော့ နေရတဲ့ ဥစ္စာ ။
ဒါပေမယ့် လမ်းမပေါ်တက်ပြီး လမ်းပိတ်အောင်လုပ်ပြီး… အများပြည်သူပိုင်နေရာကို ကိုယ်ပိုင်လိုလုပ်ပြီး…
ဒီလို တရားပွဲလုပ်တာမျိုးကျတော့ တရားလွန်ပါတယ်…
လမ်းပိတ်ပြီး တရားပွဲတစ်ခုလောက် ကျင်းပကြည့်ကြပါလား… ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာပါ…
ဒီကိစ္စက ဘာသာပြန့်ပွားရေးဆိုတာထက်… အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုလို့ ကျွန်တော်မြင်လို့ ဒီစာကိုရေးပါတယ်…
ကားလမ်းပိတ်တရားပွဲလုပ်တာ သွားရေးလာရေ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး အဆင်ပြေမှုအပြင် ရပ်ရွာလမ်းတွင်း အန္တရာယ်ကင်း ရည်ရွယ်ချက်မျိုးလည်း ပါပါမယ်။ ကွင်းပြင်လေဟာနယ်မှာ လုပ်ရင် သန့်ရှင်းရေး ပါမစ် နေရာထိုင်ခင်းကအစ အလုပ်ရှုပ်မယ်လေ။ ဒီလိုတရားပွဲဆိုတာမျိုးက တနှစ်မှာ ရံဖန်ရံခါ လုပ်တာဆိုတော့ ဘယ်သူက တာဝန်ယူ လုပ်ပေးမှာလဲ။ အစိုးရတော့ သွားအားမကိုးနဲ့ဗျို့..။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆိုလဲ ဒါမျိုးက အခါကြီး ရက်ကြီး အချိန်ကိုက်လုပ်တာများတော့ ပွဲတွေသွားတိုက်နေကြမှာ ပြီးတော့ အများပိုင်ကွင်းဆို သိတဲ့အတိုင်း ရှေ့ပွဲက စည်းကမ်းမရှိလို့ ညစ်ပတ်ကျန်ခဲ့တာ နောက်လူတွေ ခံရတယ် ဘာညာ မကျေနပ်တာလာအုံးမယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကွင်းဆိုပြီး သိမ်းထားလို့ မရနိုင်ဘူး။ ဟိုပွဲ ဒီပွဲ သာရေး နာရေး လာရှုပ်အုံးမှာပဲ။ ပုံမှန်တရားပွဲ လုပ်ရင်ကော လူတွေ လာကြမယ်ထင်လား..ဝေးသေး။ တနှစ်တခါမိုလို့ လာနာကြတာ။ ဒီတော့ မြေကွက်သီးသန့်လုပ်မယ်ဆို ဘယ်သူတာဝန်ခံမလဲ၊ ဘယ်သူ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှာလဲ။ အကောင်းဆုံးက ဆရာတော်ကျောင်းမှာ အင်တာနက်တပ်ထားပြီး ဝိုင်ယာလက်စ် ကွန်နက်ရှင်မှတဆင့် နားထောင်ဂျပါ။
ကျုပ်ကို အမှန်အကန် တွန်းပို့လိုက်ဒဲ့ လူဂျီး ..
ကိုဂျီး ဖက်ကတ်ရေ …
နောက်ကျ အပေါက်ဝ ပေါ့ဗျာ …
ဒါပေသိ … ဒါပေမယ့် … သို့တစေ … သို့ရာတွင် …
ဖိတ်စာတွေ လိုက်ဝေနေတာဗျို့ …
အခု .. ကိုဂျီးဖက်ကတ် အတွက်လည်း ပါတယ် …
ရော့ …. အင့် … လူဆိုးဂျီး …
“ဟယ်ကြောင်ဝတုတ် နင်တော့ ငရဲအိုးချိုးကပ်တော့မှာပဲ ကိုယ့်ကိစ္စကိုမပြောဘူး ” အိမ်က အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ ဘွားတော်တွေကို သွားပြောရင် အဲဒိလိုအပြောခံရမှာပဲလို့ ပြောမလို့ပါ…။ လူအတော်များများက ဘာသာရေးနဲ့ ကိုင်ပေါက်လိုက်ရင် ဘာကိုကြောက်ရတယ်မသိဘူး 90% လောက်က မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတတ်တာ…..။ တိုင်ပြည်မတိုးတက်တာ အဲဒါက နံပါတ်တစ် တရားခံပဲ ….။ စနစ်ကြောင့် အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် ဆိုတဲ့သူတွေထဲမှာလည်း အဲဒိ 90% ထဲကလူတွေပါတယ်…။